10 Dariiqo oo aad uga Badbaadiso Gurigaaga inuu dhaco
Qof kastaa wuu ogyahay sida ay muhiimka u tahay in guri ammaan lagu ilaaliyo. Nooca amniga ee saxda ah ayaa ka difaaci kara adiga, kuwa aad jeceshahay iyo hantidaada jabsiga iyo noocyada kale ee rabshadaha rabshadaha ka dhalan kara Nasiib wanaagse, waxaa jira waxyaabo badan oo aad sameyn kartid si aad u xoojiso amniga a ...
Batariga Awoodda Aaladda Amniga ama Kameradda Ammaan ee Ku Shaqeysa Solar?
Kaamirooyinka amniga qoraxda iyo kamaradaha amniga ee ku shaqeeya batteriga ayaa ah laba ikhtiyaar oo loogu talagalay kormeerka iyo daba galka guryaha ku yaal meelaha fogfog iyo kuwa juquraafi ahaan adag. In kasta oo qalab aad u horumarsan laga heli karo labada qayboodba, haddana farqiga ayaa ku jira sida ay wax uga qabanayaan baahidooda awood. W ...
Hordhaca astaamaha iyo faa'iidooyinka cabirka heerkulka iyo mashiinka isku dhafan ee aqoonsiga wajiga
Si loo xakameeyo faafitaanka fayraska, qiyaasta heerkulka gacanta ayaa loo isticmaalaa meelaha badankood, taas oo leh faa'iido darrooyinka hooseeya iyo halista sare. Qiyaasta heerkulka jiilka labaad ee Aopvision iyo aqoonsiga wejiga oo dhan-in-one wuxuu adeegsadaa qaab-hawleed sare oo heer sare ah ...